Booliska Nigeria oo soo badbaadiyey caruur gacmaha iyo lugaha loogu xiray silsilado… – Hagaag.com
Booliska Nigeria oo soo badbaadiyey caruur gacmaha iyo lugaha loogu xiray silsilado…
Posted on 27 Seteembar 2019 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Booliska Nigeria ayaa sheegay in Jimcaha maanta ay badbaadiyeen in kabadan 300 oo qof, oo badankood caruur ah, kuwaas oo gacmaha iyo lugaha ka xirnaa dhisme ku yaal waqooyiga magaalada Kaduna.
Booliska ayaa sheegay in dhismuhu uu ku yaal iskuul Islaami ah isla markaana todobo qof la qabtay ka dib markii ay weerareen Khamiistii. Ma cadda illaa iyo waqtiga carruurtan lagu hayay meeshaasi.
Wariyaha wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegay in carruurtu dhammaantood rag yihiin, oo ay da’doodu u dhaxayso shan sano illaa iyo aakhirka qaangaarnimada, isla markaana ay ku xirnaayeen silsilado lagu sii xiray biro culus oo weyn.
Afhayeen u hadlay Booliska kaduna Yakubu Sabo ayaa sheegay “Dawladda gobolka ayaa hadda siisa cunno carruurta jirta shan sano iyo wixii ka weyn,” ayuu yiri.
“Waxaan ka aqoonsanay labo caruur ah oo ka yimid Burkina Faso. Inta badan caruurta waxaa keenay waalidkood (iskuulka waqti hore) inta badan waxay ka soo jeedaan gobolada waqooyiga Nigeria,” ayuu yiri.
Waxaa xusid mudan dadka caruurta halkaasi ku heystay waxay ahaayeen macallimiin wax ka dhiga dugsiga, isla markaana warbixinnada warbaahinta maxalliga ah ay sheegeen in carruurta la jirdilay, la gaajeeyey isla markaana si xun loola dhaqmay.
Hal cunug ayaa u muuqda inuu leeyahay boogo, sida muuqata dhaawacyada ay sababeen jeedal.
Booliska ayaa sheegay in caruurta loo qaaday xero ku taal meel lagu ciyaaro ee magaalada Kaduna, kadibna loo gudbin doono xero kale oo ku taal xaafadaha magaalada, halka waalidkood la baadi goobayo.
Qaar ka mid ah waalidiinta lala xiriiray waxay aadeen dugsiga si ay u soo qaataan carruurtooda, ayuu ku daray.
Muddo sanado ah, waxaa jiray eedeymo isdaba joog ah oo ku saabsan xadgudubyo ka dhacay iskuulada Islaamiga ah ee waqooyiga Nigeria, oo ay kujirto in lagu qasbo ardayda inay dawarsadaan jidadka magaalooyinka.
Qaar ka mid ah qoysaska Nigeria waxay doortaan inay carruurtooda ka qoraan iskuulada Islaamiga ah si ay ugu helaan kafaalad iyada oo ay jiraan saboolnimo baahsan oo ka jirta dhul badan.